Kodzero-dzevanhu, 15 Gunyana 2017
Chishanu 15 Gunyana 2017
Sachigaro wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino, kana kuti Biometric Voter Register, nemusi weMuvhuro.
Mapato Ogadzirira Sarudzo Team Lacoste neG40 Zvichitsvukisana muZanu PF
Svondo rapera, mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe, vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanozivikanwa kuti vari kuG40 kuti vatungamire gadziriro yesarudzo.
Munyori mukuru mubato reMDC T, VaDouglas Mwonzora, vati kuparurwa kwechirongwa ichi zvinhu zvisina kukwana imviro-mviro dzekuda kubirira pasarudzo.
Kusarudzwa kwaVaGoba seMuchuchusi weNyika Kwoshorwa
Mutungamiri we Transform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vanoti VaMugabe vakasarudza munhu asingakodzeri kupiwa basa iri.
Nyanzvi Dzozeya nezveZuva reSarudzo dza2018
Sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika, nenhengo dzeparamende pamwe nemakanzura idzo dzinofanirwa kuitwa pamwechete gore rinouya, 2018, dzinotarisirwa kuitwa mazuva ari pakati pekupera kwemwedzi waChikunguru kusvika pakati pemwedzi waNyamavhuvhu zvichienderana nebumbiro remitemo idzva.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kuronga kunoratidzira kuNew York, panguva ichaitwa musangano weUnited Nations General Assembly, UNGA wechimakumi manomwe nembiri.